Dugsiyada Imtixaanaadka & Imtixaanka Galitaanka Dugsiyada Madax-Bannaan (ISEE) | Boston School Finder
Ku jira Wararka
Dugsiyada Imtixaanaadka iyo Imtixaanka Galitaanka Dugsiga ee Madax-Bannaan (ISEE)
​​​​​Photo: lovinkat via Flickr
Dajiso Liiska hubinta Dugsiga Imtixaanka iyo Jadwalka waqtiga Imtixaanka iyo ISEE ee loogu talagalay sannad dugsiyeedka hadeer.
Boston Public Schools (BPS) waxay leeyihiin saddex “dugsiyada imtixaanaadka ah” oo loogu talagalay ardayda ku jirta fasalada 7–12. Dugsiyada imtixaanaadka Boston waa: Boston Latin School , Boston Latin Academy , iyo John D. O'Bryant School of Mathematics and Science . (Meelaha kale ee dalka ka mid ah waxaa laga yaabaa inay ugu yeeraan dugsiyada noocan ah “ dugsiyada magnet.”) Gelitaanka dugsiyada imtixaanaadka waxaa lagu go'aamiyaa dhibcaha ardayga iyo waxqabadkooda imtixaanka caadiga ah.
Wixii macluumaad dhammaystiran ah oo ku saabsan codsashada meelaynta imtixaanka ilmahaaga, fadlan booqo websaydhka BPS.
Waxa laga Filayo ISEE waaxaa si lacag la'aan ah ugala soo bixi kartaa websaydhka ERB. Nuqulada koobiga ah ayaa iib ku heli karaa qiimaha $20 markaad kasoo iibsanaysaa ERB. Nuqulada koobiga ah waxaa sidoo kale laga heli karaa degmo kasta oo ka mid ah afarta Xarumood ee Soo-dhaweynta waxaadna ka amaahan kartaa maktabadda agtaada ah. Waxa laga Filayo ISEE sidoo kale waxaa laga heli karaa asagoo lacag la'aan ah webseetka adeegyada ee ERB.
Mashruuca Dugsiga Imtixaanaadka (ESI) wuxuu ku dadaaleyaa inuu kordhiyo kala duwanaanta saddexda dugsi ee imtixaanka Boston. Barnaamijku wuxuu adeegsaneyaa macallimiinta Boston Public Schools ee shahaadada kahaysta ELA iyo macalimiinta Xisaabta si loo caawiyo ardayda inay isu diyaariyaan Imtixaanka Galitaanka Dugsiga ee Madax-bannaan (ISEE) oo laqabanaayo Noofembar. Barnaamijka sanadlaha ah ee lagu qabto Boston Latin School wuxuu socdaa labo asbuuc bisha Agoosto iyadoo koorsooyinka dib-u-cusboonaysiinta ee xiliga dayrta laqabto usbuucyada kahoreeya imtixaanka ISEE. Fadlan booqo Webseetka BPS si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ESI.
Steppingstone Academy waxay u diyaarisaa ardayda dhiirrigelinta leh, ee qoomiyadaha latakooro sidii looga aqbali lahaa iyo inay ku guuleystaan dugsiyada heerka sare ah ee madax-bannaan, kuwa Kaatooligga, iyo dugsiyada imtixaanka qaada ee dawlada ee kuyaala aaga greater Boston. Si ay xaq ugu yeeshaan, codsadayaashu waa inay ahaadaan kuwo dagan Magaalada Boston oo hadda ay ku jiraan fasalka afaraad ama shanaad. Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dalbado barnaamijkan diyaarinta lacag la'aan ah Websaydhka Steppingstone Academy.